8 Iingcebiso zokwenza Uninzi lweKotishi yokuTyelela
Ukukwazi Ngokwenene Isikolo, Yenza Oku ngaphezu kokuthatha iNkampu yeKhenketho
Ukutyelela kweekholeji kubalulekile. Enye, banceda ukubonisa umdla wakho kwisikolo . Kwakhona, ngaphambi kokuba uzinike iminyaka yobomi bakho kunye namawaka eedola kwisikolo, kufuneka uqiniseke ukuba ukhetha indawo enomdlalo omhle wobuntu bakho kunye nomdla. Awunakufumana "ukuziva" kwesikolo kuyo nayiphi na incwadana, ngoko qiniseka ukutyelela i-campus. Ngezantsi zikho iingcebiso ezimbalwa zokufumana uninzi lwekholeji yakho.
Barry Winiker / I-Photolibrary / Getty Izithombe
Ngokuqinisekileyo, kufuneka uthathe uhambo olusemthethweni lwekampus, kodwa qiniseka ukuba uvumele ixesha lokuba ujikeleze ngokwakho. Izikhokelo zohambo eziqeqeshiwe ziya kukubonisa iimpawu zokuthengisa zesikolo. Kodwa izakhiwo ezindala kunye ezintle kakhulu azikunikezi umfanekiso wonke wekholejini, kwaye akukho nendawo yokulala yodlwengulo eye yafunyanwa ngabakhenkethi. Zama ukuhamba ngeyure eyongezelelweyo uze ufumane umfanekiso opheleleyo wekampus.
Funda iBhodi yeBluelet
Ibhodi yeCollet Bulletin. paul goyette / Flickr
Xa u tyelela isikhungo somfundi, izakhiwo zezifundo kunye neeholide zokuhlala, thabatha imizuzu embalwa ukuba ufunde iibhodi zeengxelo. Banikeza indlela esheshayo nelula yokubona okwenzekayo kwi campus. Iintengiso zezifundo, iiklabhu, izibhengezo kunye nemidlalo inokukunika ingqiqo yeentlobo zemisebenzi eyenziwa ngaphandle kwamagumbi okufundela.
Yidla kwiHolo lokuTyela
IHolo yokuDala iHolo. redjar / Flickr
Unokuvakalelwa kakuhle ngokuphila komfundi ngokutya kwihholo lokudlela. Zama ukuhlala nabafundi ukuba unako, kodwa nangona unabo nabazali bakho, unokwenza umsebenzi ojikelezayo. Ngaba abafundi babonakala bevuya? Xineke? Sullen? Ngaba ukutya okulungileyo? Ngaba kukho ukhetho olufanelekileyo lwempilo? Iiofisi ezininzi zokungeniswa ziya kunika abafundi abakhuphoni beemoto zokutya mahhala kwiihholo zokudlela.
Ukutyelela iClassi yakho enkulu
Iklasi yeKholeji. Cyprien / Flickr
Ukuba uyazi oko ufuna ukufunda, ukutyelela eklasini kwenza umqondo omkhulu. Uza kubona abanye abafundi kwintsimi yakho kwaye ubone indlela ababandakanyeke ngayo kwingxoxo yeklasi. Zama ukuhlala emva kweklasi imizuzu embalwa uze uxoxe nabafundi ukuba bafumane ukubonakala kwabo ngabafundisi babo. Qinisekisa ukubiza kwangaphambili ukucwangcisa ukutyelela eklasini-iikholeji ezininzi azivumeli ukuba iindwendwe zingene kwiklasi ezingakhanjwanga.
Hlela iNkomfa kunye noNjingalwazi
Njingalwazi weKholeji. Cate Gillon / Getty Izithombe
Ukuba uthe wagqiba kweyona nto inokwenzeka, cwangcisa ingqungquthela inotitshala kule ntsimi. Oku kuya kukunika ithuba lokubona ukuba iinjongo ze-faculty zifanisana nawe. Unokuphinda ubuze malunga neemfuno zakho zokugqwesa iziqu, ukufumana amathuba okuphanda kwegraduate, kunye nobukhulu beklasi.
Thetha kwiiLots of Students
Abafundi beKholeji. berbercarpet / Flickr
Isikhokelo sakho sokutyelela i-campus siqeqeshwe ukuthengisa isikolo. Zama ukuzingela abafundi abangahlawulwayo. Ezi ngxoxo ezingenakucinganiswa zinganokukunika ulwazi malunga nobomi bekholeji engengenxalenye yeskripthi sokwamkelwa. Ambalwa amagosa aseyunivesithi aya kukuxelela ukuba abafundi babo bachitha yonke iveki yokusela okanye ukufunda, kodwa iqela labafundi linako.
Iibhedlele zeKholeji. unincorporated / Flickr
Ukuba kunokwenzeka, sebenzisa ubusuku ekholeji. Uninzi lwezikolo zikhuthaza ukutyelela ebusuku, kwaye akukho nto iya kukunika impilo engcono yobomi ngaphezu kobusuku kwiholo yokuhlala. Umqhubi wakho womfundi unokubonelela ngobuncwane benkcazelo, kwaye mhlawumbi uxoxe nabanye abafundi abaninzi kwiholo. Uyakufumana umgangatho omhle wobuntu besikolo. Yiyiphi eyona nto ininzi yabafundi abakwenzayo ngo-1: 30 ekuseni?
Izizathu ezi-8 zokwenza ukutyelela (kunye nokokulindela)
Thatha iifoto kunye namanqaku
Ukuba uthelekisa izikolo ezininzi, qi Iinkcukacha zinokubonakala zihlukileyo ngexesha lokutyelela, kodwa ngohambo lwesithathu okanye lwesine, izikolo ziya kuqala ukudibanisa kunye engqondweni yakho. Musa ukubhala phantsi nje amaqiniso kunye namanani. Zama ukurekhoda iimvakalelo zakho ngexesha lokutyelela-ufuna ukugqiba esikolweni evakalelwa njengekhaya.
Ngaba iikholeji zekholeji ze-intanethi ziphantsi kakhulu kubafundi?
Ixesha lokusebenzisa uWann noWenn ngesiJamani
UStephen King Bibliography